जनवरी 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, नेपाल, विकास
नेपालमा किन विकास हुन सकेन ? हामी सामाजिक प्राणी हौं समाजमा हाम्रो के कस्तो भूमिका रहनुपर्छ भन्ने कुरा हरेक मानिसले जबसम्म बुझ्न सक्दैन तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । देशमा हाल के हुनुपर्छ र के भइरहेको छ भन्ने मुल्याङ्कन गर्ने दायित्व जनताको हो । परिवर्तन समयको माग हो आज हामीले विगतको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने देशमा खासै परिवर्तन हुन सकेन यसलाई हामीले आफ्नो कमजोरी ठान्दा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्र आएको पनि करिब १० बर्ष भइसकेको छ ।
यो १० बर्षमा परिवर्तन नभएको भन्न मिल्दैन किनभने जतिपनि परिवर्तन भए यूवाले विदेशबाट पठाएको पैसाले परिवर्तन गराएको छ । यूवा पलायन हुने दर झन बढ्दैछ । आज देशमा ठूलो परिवर्तन हुनुमा अर्कोतर्फ धर्म परिवर्तन पनि एक हो ।
मानिसहरूमा आस्था सवै पैसामा गएको छ कसैले सहयोग गर्छ की भन्ने कुराले नै सवैभन्दा ठूलो स्थान नेपालमाओगढ्दैछ यसले देशमा नराम्रो स्थिति पैदा गराउन सक्ने संकेत बढ्दैछ । विकास किन हुन सकेन? यो प्रश्न आज हरेकको मनमा छ तर बाहिर आउन सकेको छैन । चाहना भए नेपालमा विकासको ठूलो सम्भावना थियो तर बिकास त भयो देशको नभएर व्यक्तिको ।
जबसम्म हरेक नेपालीको मनमा जिम्मेवारी बोध हुने छैन त्यति बेला सम्म विकास नहुने निश्चित छ । चुनाब लडे पैसा कमाउन किनकि यहाँ जनताको पनि गल्ती छ । कुनै पनि व्यक्तिले घरखेत या बैंकको ऋण लिएर चुनाब लडछ भने त्याहा स्वार्थ छ भनेर बुझ्नुपर्छ । आज हामीले नेतृत्व चयन त गरेउ तर व्यापारी व्यापारीले पहिलो भुमिका पैसा कमाउनमा दिमाग खर्च गर्छ र मात्र केहि सोच्छ सोच्दा सोच्दै समयले नेटो काटी सकेको हुन्छ ।
← ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दै भरतपुर महानगर
विपी प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ सेवाका लागि तीन विभाग थपिए →
One thought on “नेपालमा किन विकास हुन सकेन ?”
Pingback:नेपाललाई किन बीर गोर्खालीको देश भनिन्छ ? यस्तो छ कारण जानी राखौ